Top 4 Siyaabaha Bedelka Music in macruufka 7 Apple Qalabka | music kala iibsiga
Top 4 Siyaabaha Bedelka Music in macruufka 9 Apple Devices
Waa waayo-aragnimo wacan inay dhegeysato muusikada ee macruufka 9 iPhone, iPad iyo iPod taabto. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, ay sabab u tahay arrimaha hagaagsan iyo network Lugood, ma ahan mar walba way fududahay in la songs wareejiyo macruufka 9 qalabka. Nasiib wanaag, weli waxaan si macruufka 9 wareejin karaan songs u iPhone, iPod taabto, iyo iPad la siyaabo kala duwan. Waxyaabaha soo socda ayaa kuu sheegayaa 4 siyaabo si ay u gudbiyaan songs aallada macruufka 9 ah. Waxaad dooran kartaa mid ka saxda ah sida ay xaaladdaada.
Xalka 1. Transfer heesahaaga macruufka 9 TunesGo (music wareejiyo macruufka 9 qalab kasta)
Xalka 2. Transfer heesahaaga macruufka 9 Lugood (u baahan tahay macruufka 9 qalab la xiriiraan Lugood)
Xalka 3. Transfer heesahaaga macruufka 9 iCloud (uun u Lugood iyo App Store ka iibsaday songs)
Xalka 4. Transfer heesahaaga macruufka 9 WordPress (fudud, waxay u baahan yihiin shabakad deggan)
Xalka 1. Transfer heesahaaga macruufka 9 TunesGo ah
Marka hore, aynu si daacad ah. Waxaad mararka qaarkood doonayaan in ay la wareegaan heeso ka kombiyuutarada saaxiibadaa "si aad macruufka 9 qalab, sax? Ok, taas waxaan idin ​​geeyn doonaa diraynaa ah. On hal gacan, aad rabto in aad hesho songs, kuwaas oo si xor ah. Dhinaca kale, haddii aad iyaga u hagaagsan in aad iPhone la Lugood ee kombiyuutarka aad saaxiib ayaa, wax walba oo ku saabsan arrimo aad u 9 qalab laga tirtirayaa. Xaaladdan oo kale, waa inaad isku daydaa software desktop-ka - TunesGo Wondershare . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad songs wareejiyo macruufka 9 qalab kasta oo si toos ah uga computer aan syncing oo nuqul ka heeso ka ah macruufka 9 qalabka kombiyuutarka ah ee la wadaago. Oo weliba inta ay socoto, aanay jirin xog ku saabsan qalabka macruufka 9 laga tirtirayaa. Hel version maxkamad ay ka hooseeya iyo hubi sida loo isticmaalo >>
Wondershare TunesGo waa qalab dhameystiran si ay u gudbiyaan music u dhexeeya qalabka computer iyo macruufka ah. Waxay ka caawisaa si ay u maareeyaan music sidoo. Waxaa On, waxaad samayn kartaa playlists kuu gaar ah oo ka saari songs aan la rabin.
Daawo Video ah inay bartaan siyaabaha Songs in macruufka 9 wareejinta
Xalka 2. Transfer heesahaaga macruufka 9 Lugood
Marka heesahaaga macruufka 9 wareejinta waxaa ku xusan, qalab ugu horeysay ee aad u malaynayso waa Lugood. Si heesahaaga macruufka 9 iPhone ku salaysan, iPod taabto, ama iPad wareejiyo via Lugood ah, marka hore waa in aad loo hubiyo in qalabka la xidhiidho Lugood ah. Haddii kale warbaahinta files ku saabsan qalabka macruufka 9 laga tirtirayaa. Connect qalab macruufka 9 kombiyuutarka iyo abuurtaan Lugood Library. Riix Show galeeysid in View menu ku qoofalan ka. Riix qalab macruufka hoos Qalabka iyo guji Music tab. Hubi nidaameed Music iyo guji nidaameed .
Lugood waa aalad kaamil ah si ay u maareeyaan music. Si kastaba ha ahaatee, ma ogolaan kartaa in aad la wadaagto heeso qalabka kala duwan macruufka si xor ah.
Xalka 3. Transfer heesahaaga macruufka 9 iCloud
Ka dib markii ay ku soo jeestay oo ku iCloud, mar kasta iyo meel kasta oo aad iibsato hees, heesta la heli doonaa isla on macruufka aad 9 qalab. iCloud sidoo kale waa wax fudud in aad hesho si aad ee la soo dhaafay iibsaday music ee Lugood Store ku saabsan qalabka macruufka iyo sidoo. Burcad app Lugood ee ku saabsan qalabka macruufka iyo gasho la ID Apple aad. Tubada icon uu iibsaday ah oo ku saabsan suuqa kala oo Music xusho. Markaas waxaad kala soo bixi kartaa adiga oo la soo dhaafay iibsaday music in aad qalab macruufka 9. Raac talaabooyinka si ay u gudbiyaan heesahaaga macruufka 9 by suuragelinayo iCloud.
Daar iCloud: Tubada Settings > iCloud in ay galaan ID Apple aad.
Sahlo si toos ah kala soo bixi: Tubada Settings > Lugood & App Dukaamada > shid shido ee dalwaddii la xiriira Music .
Si aad si buuxda loogu isticmaalo iCloud, waa in aad la dhigay iCould aad Mac ama PC .
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki in iCloud kaliya wareejiyo Lugood Store ee App Store ka iibsaday heesahaaga macruufka aad 9 qalab. Songs aad wada dooxay ka CD ama lagala soo bixi internet-ka uma wareegi karo ilaa iyo inta aad awood u adeega Lugood Match ee iCloud. Waxa aad ku kici doonaa $24.99 sannadkii laakiin aad u ogolaanaya in ay helaan koox buuxda oo aad idil maktabadda music digital shakhsika dhan kombiyuutarada iyo qalabka yihiin in la xiriira xisaabta iCloud.
Xalka 4. Transfer heesahaaga macruufka 9 WordPress
Haddii aadan rabin in uu haba yaratee si ay u gudbiyaan music qalab macruufka ah, waxaad u baahan kartaa in aad isticmaasho adeeg Cloud ku salaysan, sida WordPress. Waxaad kartaa dejisan iyo rakibi DropBox labada on your computer iyo qalab macruufka ah 9. Samee xisaab u DropBox. Rid heesahaaga WordPress on your computer oo hagaagsan. On qalab macruufka, gasho DropBox la account ka mid ah oo hagaagsan. Ka dibna waxaad arki kartaa in heesaha aad hoos u jiraan ku saabsan qalabka macruufka 9.
5 Solutions in ay tirtirto Photos ka macruufka 7 Devices
Sida loo saar Music inay iPhone ka Computer kale
Tutorial: ka ah Drive External Hard si iPhone Bedelka Music
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in macruufka Devices
Si fudud Bedelka SMS, Music, Video, Photos, Calendar iyo Xiriirada ka macruufka in Sam
Sida loo Delete Xiriirada on macruufka in Dufcaddii
Sidee Waxaad Download Music for macruufka iyo Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Lumia in macruufka Devices
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in macruufka Devices
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in macruufka Devices
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Acer Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay macruufka
Sida loo Delete Photos on macruufka Effortlessly
> Resource > macruufka > Top 4 Siyaabaha Bedelka Music in macruufka 9 Apple Devices